Kheladi - काउन्टर अट्याक: के होला अल्मुताइरीको भविष्य ?
अब्दुल्लाह अल्मुताइरी । नेपाली फुटबल समर्थकबीच निकै लोकप्रिय नाम । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक । कतार फुटबल संघको सहयोगमा आएका कुवेती नागरिक ।
एएफसीको व्यावसायिक प्रशिक्षक लाइसेन्सप्राप्त अल्मुताइरी नेपाल आएको १५ महिना पुग्दै छ । उनले औपचारिक रूपमा टिम सम्हालेको त भर्खर १४ महिना भयो । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकका रूपमा उनको पहिलो खेल गत वर्ष बैशाख १२ गते कतारविरुद्ध थियो । माल्दिभ्सको मालेमा गत कात्तिकमा सम्पन्न १३औं साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल पुग्नु अल्मुताइरीको करियरको उत्कर्ष थियो ।
तर, त्यो जस दिइरहँदा नेपाली खेलाडी र आफ्नै फुटबल विगतप्रति एउटा ठूलो अन्याय भइरहेको छ । त्यो भनेको के भने यसपालि थोरैमात्र टोलीको सहभागिताका कारण प्रतियोगिताको स्वरुपमै परिवर्तन भएको थियो । जसका कारण साफ च्याम्पियनसिप इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको फाइनल यात्रा सम्भव भयो ।
उसो त अल्मुताइरीको नेतृत्वमा नेपालले कुल १९ खेल खेलेको छ । त्यसमध्ये १३ मा हार भोगेको नेपालले ५ जित र २ बराबरी नतिजा निकालेको छ । १९ खेलमा नेपालको तर्फबाट १९ गोलमात्र हुँदा विपक्षी टोलीले ३६ गोल गरेको छ । सर्सर्ती हेर्दा अल्मुताइरीको कार्यकालमा नेपाली फुटबलले मैदानभित्र विगतजस्तै औसतमात्र प्रदर्शन गरेको छ । साफ च्याम्पियनसिपमा फाइनल पुग्नुको जस उनलाई जबरजस्ती दिन खोजिन्छ ।
त्यसअघि समूह चरणमा तीन खेलबाट ७ अंक जोड्दा सेमिफाइनलमात्र पुगिन्थ्यो । यसपालि पहिलो चरणका ४ खेलमा ७ अंकमात्र जोड्दा पनि फाइनलको ढोका खुलेको हो । सत्य यही नै हो । सधैंजसो ८ टोलीको सहभागिता रहने गरेको साफ च्याम्पियनसिपमा यसपालि ५ टिमले मात्र भाग लिएका थिए । पाकिस्तान र भुटानको चुनौती नेपालका लागि सामान्य हुने मान्दा पनि अनुपस्थित हुनेमा पछिल्ला संस्करणमा सधैं नेपालको यात्रामा तगारो हाल्दै आएको अफगानिस्तान पनि थियो ।
उनकाविरुद्ध एन्फा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले छानबिन समिति बनाए । समितिको प्रतिवेदनले उनलाई आफ्नो काममा मात्र केन्द्रित हुन र सामाजिक सन्जालमा अनावश्यक सक्रियता नराख्न निर्देशन दियो । तर, उनले त्यसविरुद्ध राजीनामाको धम्की दिए । अल्मुताइरीले काम सम्हालेको ६ महिना नबित्दै राजीनामाको धम्की दिएको यो दोस्रोपल्ट थियो । तर दोस्रो पटक पनि धम्कीमात्र दिए, उनले राजीनामा दिएनन् ।
यी भए मैदानका कुरा । अल्मुताइरी र नेपाली फुटबलको चर्चा गर्दा योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मैदानबाहिरका विषयहरू हुने गर्छन् । मैदानबाहिर चर्का कुरा गरेरै अल्मुताइरीले भावुक नेपाली समर्थकको मन जितेका छन् । मैदानभित्र खासै उत्साहजनक नतिजा दिन नसके पनि उनीप्रति समर्थकले दर्शाएको माया र विश्वास आश्चर्यजनक नै छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय हो । त्यसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङविरुद्ध अल्मुताइरीले लगाएको आरोप साँच्चै गम्भीर थियो । नेम्बाङमाथि आरोप लगाइरहँदा उनले फेसबुकमा समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै पोस्ट लेखेर राजीनामाको धम्की दिए । सार्वजनिक स्थलमा चुरोट खाएको विषयमा पनि उनी दुई पत्रकारसँग घम्साघम्सीमै उत्रिए ।
नेपाली टोली मालेमा साफ च्याम्पियनसिप खेल्दै थियो । फाइनल पुगिसकेको अवस्थामा अल्मुताइरीले फेरि एक पटक कुनै पनि नेपाली मिडियामा आउँदै नआएको कपोकल्पित समाचारको विषय उठाएर राजीनामाको धम्की दिएका थिए । तेस्रो पटक राजीनामाको धम्की दिँदा त स्वाभिमानी नेपालीको मन दुःखाउने काम पनि गरे ‘म अब कहिल्यै नेपाल फर्किन्न’ भनेर । यसपालि पनि त्यो धम्कीमै सीमित भयो । अल्मुताइरीले फेरि पनि राजीनामा गरेनन् । उनी अझै पनि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गरिरहेकै छन् ।
अझ आश्चर्यलाग्दो कुरा त, युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज आफैं समर्थकझै भावुक भएर अल्मुताइरीलाई लिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मै पुगे । मानौं, अल्मुताइरी विश्वकपमा नेपाललाई उपाधि जिताएर ट्रफी लिएर आउँदै थिए । मन्त्रालयमा उनलाई बोलाएर, फोटो खिचाएर आफूजत्तिको खेलकुद बुझेको र यसको ख्याल गर्ने मन्त्री मन्त्रायलले पाएकै थिएन । मानौं अल्मुताइरीलाई फर्किन राजी गराएर उनले नेपाली फुटबललाई डुब्नबाट जोगाएका थिए ।
पछिल्लो पटक त अल्मुताइरीले नेपाली फुटबलमै अहिलेसम्म नभएको घटना गराए । हिजो खेलाडीको हितका लागि आफू जुन हदसम्म जान पनि तयार रहेको बताउने उनले नेपाली राष्ट्रिय टोलीका १० मुख्य खेलाडीलाई प्रशिक्षण सिविरबाटै निकालिदिए । खेलाडीको दोष थियो, बस्न सुविधासम्पन्न होटल र खानका लागि पौष्टिक खुराकका लागि अनुरोध गर्नु । केही अघिसम्म अल्मुताइरी आफैंले भन्ने गरेको कुरा गरेवापत नेपाली फुटबलका लागि लामो समयदेखि योगदान गरिरहेका १० खेलाडीले अनाहकमा टिम छोड्नुपर्यो । आफ्ना सहकर्मी साथीमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोल्दा कप्तान पनि टिममा रहने वातावरण बनेन । ११ खेलाडी अल्मुताइरीको टिमबाट निकालिए ।
सायद, विश्वकै फुटबल इतिहासमा एकैपटक राष्ट्रिय टोलीका मुख्य ११ खेलाडी यसरी निकालिएको घटना अर्को पाइन्न होला ।
विवादै विवादका यति धेरै शृंखलाका बावजुद अल्मुताइरीको लोकप्रियतामा कमी आएको छैन । समर्थकहरू उनैलाई नायक मानिरहेका छन् । हिजो तिनै खेलाडीको प्रत्येक शटमा ताली बजाउने समर्थकहरू भए नभएको आरोप लगाएर आफ्ना प्रिय स्टारविरुद्ध आगो ओकलिरहेका छन् । मानौं, अल्मुताइरी आउनुअघि नेपालमा फुटबल नै थिएन र उनको बर्हिगमनपछि पनि रहने छैन । अनि अल्मुताइरी आएपछि चाहिँ नेपाली फुटबलमा भयंकर जादु भइरहेको छ ।
समर्थकको स्वभाव जहिले पनि भावनामा बग्ने खालको हुन्छ । तर, प्रशासन भावनामा बग्न सक्दैन । अनि भावना त खेलाडीको पक्षमा पनि छ नि । अल्मुताइरी आउनुअघि पनि नेपाली फुटबलको शान त तिनै खेलाडीले जोगाएका हुन् ।
प्रसंग बदलौं । पछिल्लो विवादपछि भने अल्मुताइरीले अझैसम्म राजीनामाको तुरूप फ्याँकेका छैनन् । अल्मुताइरी विवाद शृंखलाको पछिल्लो संस्करणपछि बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार पनि उनले राजीनामा घोषणा गरिरहनु जरुरी छैन । एन्फाले बनाएको त्यो समितिले एसिया कप छनोटको तेस्रो चरणपछि अल्मुताइरीलाई बिदा गर्न एन्फालाई सुझाइसकेको छ । यस्तोमा के होला त अल्मुताइरीको भविष्य ?
शेर्पा पक्षले निर्वाचन जितेर थप चार वर्ष एन्फाको बागडोर हातमा लिए अल्मुताइरीको निरन्तरता हुने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । शेर्पा स्वयंको अभिव्यक्तिले पनि त्यही संकेत गर्छ । प्रतिवेदन पालना गर्नुहुन्छ त ? भनेर खेलाडी डटकमले सोधेको प्रश्नमा शेर्पाले ‘प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नै बाँकी रहेको’ बताउँदै प्रतिवेदन पढेर कार्यसमितिमा छलफल गरेपछि मात्र निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
एन्फा अहिले चुनावमा होमिएको छ । असार ६ गते हुने चुनावका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा जोसँग अल्मुताइरीको अत्यन्तै निकट सम्बन्ध छ र अल्मुताइरीसँग निकै खराब सम्बन्ध भएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ आ–आफ्नो प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिइसकेका छन् । निर्वाचन जसले जिते पनि पूर्वखेलाडी राजेश शाहीले मिलापत्रको कागज नाम दिएको छानबिन समितिको सतही प्रतिवेदनको कुनै अर्थ हुने छैन । यो पक्का छ ।
शेर्पा पक्षबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका एक पदाधिकारीले पनि आफूहरू निर्वाचित भए अल्मुताइरीको निरन्तरता हुने बताए । ‘अल्मुताइरीले राम्रो काम गरिरहेका छन् । यही वर्ष कतारमा विश्वकप छ । कतार फुटबल संघले हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहेको छ । हाम्रो लिगमै सबैभन्दा ठूलो सहयोग कतारको छ । अनि कसरी उसलाई हटाउने ? फुटबल संघ चलाउनु भनेको व्यक्तिगत इबी साँध्ने कुरा त होइन नि,’ शेर्पाविरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङप्रति व्यंग्य गर्दै ती पदाधिकारीले भने ।
नेम्वाङ निर्वाचित भए के होला त अल्मुताइरीको भविष्य ? कुरा प्रस्ट छ, नेम्वाङ जिते अल्मुताइरी राष्ट्रिय टिममा हुने छैनन् । अल्मुताइरीले धेरै अघि सञ्चारमाध्यमबाटै घोषणा गरिसकेका छन्, ‘कर्माछिरिङ शेर्पा मेरो दाजुभाइजस्तै हो । म उनी भएमात्र नेपालमा बस्छु । अरू कोही अध्यक्षसँग काम गर्दिनँ ।’
नेम्बाङको भने यसमा फरक योजना छ । आफू चुनाव जिते यसअघिका सबैखाले व्यक्तिगत विषय विर्सेर नयाँ सिराबाट नेतृत्व थाल्ने उनी बताउँछन् । ‘म कसैसँग कुनै पनि खालको द्वेष राखेर काम गर्दिनँ । सबैलाई मौका दिन्छु । म आफू पनि अनुशासनमा बस्छु र सबैलाई अनुशासनमा बस्न लगाउँछु । चाहे त्यो खेलाडी होस् वा प्रशिक्षक, चाहे पदाधिकारी नै होस् । सबैजना अनुशासनमा बस्नुपर्छ,’ खेलाडी डटकमको जिज्ञासामा नेम्बाङको जवाफ थियो ।
जुम्ला फुटबलका अध्यक्ष बुडथापा नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश युवा तथा खेलकुद विभागको उपप्रमुखमा मनोनित
अध्यक्षकै इतिहासबारे बेखबर एन्फा